09256637932 | 09453905756
Carpet Steamed Cleaning Services
Frequently Asked Questions to Clean Pro
Clean Pro ရဲ့ ဧည့်သည်များ မကြာခဏမေးလေ့ ရှိတဲ့ မေးခွန်းတွေကို ဖော်ပြလိုက်ပါတယ်။
မေး ။ ။ ဘယ်လို သန့်ရှင်းရေးမျိုးပေးတာပါလဲ။။
ဖြေ ။ ။ သန့်ရှင်းရေး နဲ့ ပက်သက်တာ အကုန် ဝန်ဆောင်မှု ပေးပါတယ်။ အသေးစိတ် သန့်ရှင်းတာ ဖြစ်ပြီး အိမ်မပြောင်းခင် လူနေလို့ ရသည်အထိ အသေးစိတ်သန့်ရှင်းခြင်း၊ ဆောက်လုပ်ရေးဆိုဒ်များ ဆောက်လုပ်ပြီးသည်နှင့် အသေးစိတ်သန့်ရှင်းခြင်း၊ ကော်ဇောများ လျှော်ဖွပ်ခြင်း၊ မွေ့ယာ ဆိုဖာ များ လျှော်ဖွပ်ခြင်း၊ ကြွေပြား ကျောက်ပြားများ ဆေးခြင်း၊ အရောင်တင်ခြင်း၊ ပါကေငးများ ဖယောင်းတင်ခြင်း၊ မှန်သန့်ရှင်းခြင်း၊ Contract ဝန်ထမ်းများ ခန့်အပ်ခြင်း စတာတွေ ကို ဝန်ဆောင်မှု ပေးပါတယ်။
မေး ။ ။ ဝန်ဆောင်စရိတ် ဘယ်လို ယူတာလဲ။
ဖြေ ။ ။ ဘယ်လို ဝန်ဆောင်မှုယူတာလဲ ဆိုတာ ပထမ သိဖို့လိုပါတယ်။ One Time Deep Cleaning အတွက်ကတော့ သန့်ရှင်းရေး လုပ်မယ့်နေရာကို အရင် လာ ကြည့်ပါတယ်။ လာကြည့်ပြီးတော့ လုပ်ရမယ့် Scope, ကြာနိုင်တဲ့ အချိန်၊ သုံး ရမယ့် စက်ပစ္စည်း စတာတွေကို အသေးစိတ်တွက်ချက်ပြီး မြန်မာ ကျပ်ငွေ ၆၀ ကျပ်မှ မြန်မာ ကျပ်ငွေ ၄၀၀ ကျပ် အတွင်း ဝန်ဆောင်မှု ပေးပါတယ်။
မေး ။ ။ Projects Cleaning တွေရော လုပ်ပါသလား။
ဖြေ ။ ။ လုပ်ပါတယ်။ ဆောက်လုပ်ရေး Projects တွေ ဟာ ဆောက်လုပ်ပြီးစမှာ စနစ်တကျ နဲ့ သေချာ သန့်ရှင်းအောင်လုပ်နိုင်တဲ့ Professional Cleaning Teams တွေ လိုအပ်ပါတယ်။ ဟိုတယ်များ ၊ အိမ်ရာ များ ၊ စက်ရုံများနှင့် ၊အဆောက်အဦးသစ်များအတွက် အထူးဈေးနှုန်းဖြင့် ဝန်ဆောင်မှု ပေး နေပြီး မိမိ ပြီးမြောက်လိုသော အချိန် အတွင်း အရည်အသွေးရှိရှိ ပြီးမြောက်စေဖို့ Clean Pro မှ တာဝန်ယူပါတယ်။ Project Cleaning အတွက်လည်း ဝန်ဆောင်ခ အသက်သာဆုံးနဲ့ ဝန်ဆောင်မှု ပေးနေပါတယ်။
မေး ။ ။ ဈေးကြီးလား။
ဖြေ ။ ။ ကုန်သွားတဲ့ ငွေထက်၊ ပြန်ရမယ့် ဝန်ဆောင်မှု ၊ ပြန်ရမယ့် ပတ်ဝန်းကျင် ၊ စိတ်ချမ်းသာမှု ၊ ကျန်းမာ ရေး ဒါတွေကို ချိန်ကြည့်ရင်တော့ ပေးရတာထက် တန်တယ်ဆိုတာ ခံစားမိပါလိမ့်မယ်။ ကျန်းမာသန့်ရှင်းတဲ့ဘဝ နဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုတာ ငွေနဲ့ လဲလို့မရဘူး မဟုတ်လား။
မေး ။ ။ ပုံမှန် နေ့စား သန့်ရှင်းရေး ဝန်ဆောင်မှုပေးတာ နဲ့ Clean Pro က ဝန်ဆောင်မှု နဲ့ ဘာကွာပါသလဲ။
ဖြေ ။ ။ Good Question ပါပဲ။ အပြင်မှာ တစ်နေ့ ၅၀၀၀ လောက် ပေးရင် တစ်နေကုန် ခိုင်းချင်တာ ခိုင်းလို့ ရတဲ့အနေအထားမှာ ဘာကြောင့် သန့်ရှင်းရေးကို ဒီထပ်ပိုငွေကုန်ကြေးကျခံ လုပ်ရမှာလဲ ။ Clean Pro က ဝန်ဆောင်မှု ပေး တဲ့ သန့်ရှင်းရေးဟာ လုံလောက်တဲ့ဝန်ထမ်း အရေအတွက်၊ သန့်ရှင်းရေး သုံး ဆေးပစ္စည်းများ၊ စက်ပစ္စည်းများ နဲ့ အတူ တစ်ပါတည်း ဝန်ဆောင်မှု ပေးတာ ဖြစ်ပါတယ်။ မှန် များ ၊ မှန်ဘောင်များ သန့်ရှင်းခြင်း၊ ကြွေပြား ကျောက်ပြားများ ဂျီးချွတ်ပေးခြင်း ၊ အိမ်သာ များအား ပိုးသတ် အသေးစိတ် သန့်ရှင်းပေးခြင်း ၊ အိပ်ခန်းများ ၊ ဧည့်ခန်းများနှင့် ပရိဘောဂများ ၊ မီးခလုတ်များမှ အစ နံရံ လက်ရာများ ဖျက်ခြင်း စတာတွေ အထိ အသေးစိတ် သန့်ရှင်းခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။
မေး ။ ။ သန့်ရှင်းရေး လာလုပ်မယ်ဆို ဘာတွေ ပြင်ထားပေးဖို့လိုပါသလဲ ။
ဖြေ ။ ။ ရေ နဲ့ မီး ပဲ အဆင်ပြေအောင်လုပ်ထားပေးပါ။ ကျန်တာ Clean Pro က အကုန်ယူလာမှာပါ။
မေး။ ။ ဘယ်မြို့နယ်တွေမှာ Clean Pro ဝန်ဆောင်မှုရ နေပြီလဲ။
ဖြေ။ ။ အခုတော့ ရန်ကုန် ၊ မန်းလေးနဲ့ နေပြည်တော်မြို့ကြီးတွေမှာ ဝန်ဆောင်မှု ရယူနိုင်ပါပြီ။
မေး ။ ။ သန့်ရှင်းရေး ခေါ် မယ် ဆို ဘယ်လို စ ခေါ် ရတာလဲ။
ဖြေ ။ ။ Clean Pro က နေ ဝန်ဆောင်မှု စခေါ်မယ် စဉ်းစားပြီးပြီဆိုရင်တော့ ရုံးဖုန်းတွေ ဖြစ်တဲ့ ၀၁ ၅၂၅၀၁၁ ၊ ၀၉ ၂၅၆၆၃၇၉၃၂ စတဲ့ နံပါတ်တွေကိုူ ဆက်သွယ်ပြီး မိမိ သန့်ရှင်းရေး လုပ်လိုတဲ့ နေရာ ကို ပြောပြီး အခမဲ့ Survey လာကြည့်ဖို့ Booking စတင်ယူပါ။ Survey Team မှ လာရောက်ပြီးတဲ့နောက်မှာ တော့ ကျသင့်သော ဝန်ဆောင်ခကို၂၄ နာရီအတွင်းပြန်လည်ပေးပို့ပါလိမ့်မယ်။ ဈေးနှုန်း ကိုသဘော တူ လက်ခံပြီးပြီဆိုရင်တော့ Clean Pro မှာ မိမိ သန့်ရှင်းလိုတဲ့ ရက်ကို Booking ယူ ပြီး သန့်ရှင်းရေး ဝန်ဆောင်မှု ကို စတင်ရယူနိုင်ပါပြီ။
မိမိတို့အိမ်မှာ Covid ကြောင့်နေထိုင်မကောင်းတဲ့သူရှိတဲ့အခါ ဘယ်လိုပြုစုသင့်လဲ ?
မွေ့ယာတွေမှာ ပိုးမွှားတွေ ဘယ်လောက်ထိ ကပ်တွယ်နေနိုင်လဲ?
No 1199/ B , OakPone Seik Street, (2 ) Ward, Northokkalapa, Yangon
01 525011/ 09 256637932
No BB 3/ 78, Between Theik Pan Road & 57 Road, Chan Mya Thasi Township, Mandalay
09 444685650/ 09 444685651
No 1124, Near Shumawa Street & Thapyay Street, Dakkhina Thiri Township, Naypyitaw
09 897778711, 09 897778722
© 2021 CleanPro.All Rights Reserved.